Nagu saabsan - Qaadashada Dahabka Co., Ltd.
Waxay ku taal Zhangjiagang, magaalo deked u dhow Shanghai, oo ay weheliso Wabiga Yangzi, magaalada Zhangjiagang City Daking Jewelery Co., Ltd. waxaa la aasaasay 1992. Waxaan ku howlaneynay beerista luul, soosaarid sidoo kale jawharad dhagax qaali ah oo qaali ah iyo isku qurxiyo dharka moodada in ka badan 28 sano.
Waxaan leenahay beero beereed noo gaar ah oo leh biyo daboolaya in ka badan 667,000 mitir murabac ah, iyo sidoo kale warshad wax soo saar, iyo awooddeena wax soo saar sanadle ah waxay gaartay in ka badan 100 metrik tan. Waxaan soo saareynaa alaabooyin semi-dhammeeyey iyo alaabooyin dhammeystiran.waxyaabaha aan isku qurxino ee moodada ah waa noocyo kala duwan, oo ay ka mid yihiin silsilado, dugaagado, hilqado iyo waxyaalaha laysku qurxiyo. Waxaa jira in ka badan 8,000 naqshadood. In kabadan labaatan sano horumarineed, shirkadeena waxay keensatay tikniyoolajiyad casri ah iyo midabeyn casri ah waxayna sameysay xariiq soosaarid ah, iyo waliba nidaam isku dhafan oo tayo iyo maamul leh. Ku qanacsanaanta gudaha iyo dibada. 23-kii sano ee la soo dhaafay, badeecadeenu waxaa loo dhoofiyay dalal badan oo adduunka oo dhan ah, iyadoo la siinayo qiimo macquul ah iyo adeeg aad u fiican, shirkadeenu waxay heshay amaan ay ka helaan macaamiisheenna adduunka oo dhan. sumcad sare labadaba suuqyada gudaha iyo dibada.Waxaan si isdaba joog ah u balaarineynaa miisaanka ganacsigeena waxaanan iskudayeynaa sida ugufiican ee aan u siino alaab kafiican oo kafiican iyo adeeg dhamaan macaamiisha. waxaa ka go'an inay gacan ka geystaan ​​wax soo saarka dahabka iyadoo la iimaan wanaagsan, wax ku biirin iyo niyad xamaasad leh.
Qaadashada Dahabka Co., Ltd.
Waxaan la macaamilnaa farshaxanka luul, alaabada qolofka, dhagaxyada qaaliga ah ee semi-ka ah iwm
Iyadoo la raacayo siyaasadda ganacsiga ee "mas'uul ka ah macaamiisha, ku guuleysiga-guuleystayaasha", shirkaddu waxay si adag u xakameysaa tayada wax soo saarka.
Shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa isku-dhafka saxda ah ee dahabka dhaqameed iyo kan casriga ah, faa'iidooyinka iyo hal-abuurnimada, farsamada iyo farshaxanka.
Macaamiisha Marka Hore
Waxaan haynaa fikrad naqshad cusub, koox shaqo oo hufan, had iyo jeer u hoggaansamaan hawlgalka caadiga ah, adeegga sharafta leh, baahiyaha iyo ku qanacsanaanta macaamiisha marka hore.
Qaab dhismeedka wax soo saarka shirkaddu waa hodan, noocyo kala duwan, soo saarista silsilado, dugaagado, jijimooyin, silsilado, hilqado, kaatunno, dugaagado, waxay ku habboon yihiin sagaal qaybood, wadar ahaan in ka badan 8000 nooc oo alaab ah.
Shirkaddu waxay leedahay fikrad naqshad cusub, koox wax ku ool ah oo wax ku ool ah, had iyo jeerna u hoggaansanta hawlgalka caadiga ah, adeegga daacadda ah, dhigaysa baahida macaamiisha iyo qanacsanaanta meesha ugu horreysa, waxay ku guuleysatay ammaanta macaamiisha dal iyo dibadba.
isku darka alaabta
Aagga biyaha lagu dhaqo
+ mitir laba jibbaaran
Maxaan Ku Dhagannahay
Shaqaalaha qaadashada wali waxay u hoggaansamaan ruuxa adkeysiga, shaqada adag iyo kaamilnimada
Waxaan u hoggaansanahay mabda'a "tayada badbaadada, sumcadda horumarka"
Daacad u ahaanta macaamiisha iyo taxadarka shaqada, waxaan ku dadaalnaa inaan horay u sii wadno hirarka ganacsiga.
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabtayada, fadlan nala soo xiriir waqtigeeda. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si wadajir ah u horumarino suuqa dahabka loona abuuro mustaqbal ifaya warshadaha dahabka.